politika Fiarovana fiainan'olona - Infinity-Electronic
Miaro ny mombamomba anao manokana ny Infinity-Electronic.hk, ary tsy mamoaka, manofa na mivarotra azy ho an'ny antoko fahatelo.
Tongasoa eto Infinity-Electronic.hk. Amin'ny Infinity-Electronic.hk, ny fijerinao manokana sy ny fiarovana ny mombamomba anao manokana dia raisina amim-panajana. Ity fanambarana manaraka ity dia hampahafantatra anao ny fomba fampiasantsika sy ny fitantanana ny angona nangatahinay. Isaky ny mitsidika Infinity-Electronic.hk ianao, ny servery dia manaiky ary manokatra ny adiresy IP anao. Ny adiresy IP dia ny adiresin'ny solosaina manao fangatahana amin'ny tranonkala web. Tsy misy fampahalalana manokana na antsipirihany azo raisina ao anatin'ity fifanakalozan-kevitra ity-ny tranokala mpitsidika dia tsy natao hamolavola an'ity vaovao ity.
Ao amin'ny Infinity-Electronic.hk, ny adiresy IP an'ny mpitsidika dia averimberina jerena sy dinihina amin'ny tanjon'ny fanaraha-maso, ary ny fanatsarana ny tranonkalanay amin'ny fomba tsotra, ary tsy hizara ivelan'ny Infinity-Electronic.hk. Mandritra ny fitsidihana amin'ny tranokala, dia mety hangataka anao ny fampahalalana momba ny fifandraisana (adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, lahatahiry ary adiresy amin'ny fandefasana / faktiora). Ity vaovao ity dia nangonina tamin'ny volavolan-kevitra an-tsitrapo-ary amin'ny fankatoavanao ihany.
Ny Infinity-Electronic.hk dia ahitana votoaty, serivisy, dokam-barotra ary fitaovana hafa izay mampifandray amin'ny tranonkala natsangan'ny antoko fahatelo. Tsy manana fanaraha-maso ny fampahalalana manokana napetrak'ireo tranonkala ireo izahay, ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fahamarinan'ny tranonkala.
Ity dokam-barotra ity dia miresaka fotsiny amin'ny fampiasana sy ny fampielezana ny vaovao izay nangonina antsika, ny fitsipika samihafa dia azo ampiharina ho an'ny antoko fahatelo. Infinity-Electronic.hk dia tsy mifehy ny tranonkala hafa, ary ity Politika tsy miankina ity dia tsy mihatra amin'izy ireo. Mamporisika anao izahay hiantehitra amin'ny politika momba ny fiainana manokana ireo tranainy ireo raha azo atao.